Gịnị bụ ASCTray EXE? - Na-Efu Efu
Isi > Na-Efu Efu > Asctray exe na-efu - ajụjụ ndị nkịtị
Asctray exe na-efu - ajụjụ ndị nkịtị
Gịnị bụ ASCTray EXE?
Nke bụ eziokwuASCTray.exefaịlụ a bụ sọftụwia nke Advanced SystemCare nke IObit Pty, Ltd .. 'ASCTray.exe'bụ otu n'ime usoro nhazi atọ dị na IObit's Advanced SystemCare nche na ngwanrọ nhicha ndekọ. Ọ na-egosiputa akara ngosi ASC (gburugburu 'C' gburugburu) na sistemụ sistemụ, yana menu ma ọ bụrụ aka nri.
Gịnị bụ elu SystemCare tree?
A na-eji ya iji melite arụmọrụ kọmputa na ọsọ.Advanced SystemCarena-agụnye nsụgharị free na ụdị PRO. Ọrụ na nsụgharị abụọ ahụ gụnyere nhichapụ ihe ndekọ kọmputa, mee diski diski, nyocha maka malware, ma hichaa ụzọ mkpirisi agbajiri.
M Kwesịrị wepu elu SystemCare?
Ọ bụrụ na ị ahụwo nke a rogue nche software na kọmputa gị na usoro na-enwe obi abụọ banyere ya na-eme, ịkwesịrịhọrọ makaAdvanced SystemCaremwepụ iji hapụ ohere diski gị site na ihe ndị na-abaghị uru. Jiri mgbochi malware software ma ọ bụ ntuziaka ntuziaka kameena.
Hey na nke a bụ Tim Tipis si Majorgeeks Comand Nke a bụ nkuzi ngwangwa n'iji usoro nlekọta dị elu na-enweghị iobit. Ekwesịrị m ịkọwa na Kurz dịtụ iche na nke a. Amaghị m ma m nwere ike ime nke a n'okpuru nkeji ise, nke bụkarị ihe mgbaru ọsọ m, mana m ga-eme ike m niile na anyị ga-egosi gị usoro ihe omume a wee nwee ike ịlele ụfọdụ n'ime ihe ndị ọzọ dị egwu nke ị nwere ike igwu na-enweghị ịbanye n'ọtụtụ nkọwa, ma ọ bụghị ya, ọ ga-abụ nkuzi nkuzi 20 nke nwere oge maka ya, nke ọma ma ọ bụrụ na ịlele ihu n'ihu usoro mmemme ahụ ga-agbaso akụkọ kachasị ọhụrụ. iji jide n'aka na ị na-ruo ụbọchị ị nwere ike pịa ebe a n'ihi na ọ bụ ezie na nke a bụ kpam kpam free i nwere ike inwe ụfọdụ mmezi atụmatụ m na-eche na ọ bụ gburugburu 1295 na-eme ihe n'eziokwu n'ihi na m onwe m ihe niile na nso nke iri na iri na abụọ dollar ma ọ bụrụ na m nwetara ihe omume dị ka m enwere ike ịzụta ya naanị n'ihi na ị maara na ọ bụ ụzọ isi nyeghachi ihe ọbụlagodi na achọghị m atụmatụ atụmatụ ndị ọzọ Enwere ihe kpatara ya, mgbe ịpịrị bọtịnụ ahụ yana na windo isi, ọ ga-akpọrọ gị gaa na weebụsaịtị, na-agwa ị ihe ị ga-enweta maka dolla iri na abụọ ma ọ bụ iri na atọ rs, ị nwere ihe ole na ole ebe a, ị nwere nchegbu gị kachasị, pịa wee laa, nke ahụ bụ otu ihe na-amasị m banyere arụsị arụsị, ihe niile ị ga - eme bụ naanị otu ịpị ị ga - aga ma ọ bụ ị nwere ike ịbịa Ebe a iji rụọ ọrụ windo ma ị nwere ike ime nyocha abụọ na ntuziaka nyocha na nyocha nwere ike ịbịa ebe a ma dị ọcha ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọpụta ma lelee ihe ị nwere ike ịbịa ebe a ma mee nke ahụ n'okpuru ọrụ ndị na-alọghachi niile anyị ikpo utilities nke a anaghị agba ọsọ na ihe ndị bụ isi utilities na niile bụ stof iji nweta otu Little Geek Ya mere, ebe a ma ọ bụrụ na anyị kpachara anya ọ ga-amalite na spyware iwepụ na-ahapụ gị na kọmputa na iobit stool mgbe sp yware a na-scanned na-agbalị ọzọ maka njehie don't naghị enweta arụmọrụ dị ukwuu, ikekwe ọ bụghị nkwalite arụmọrụ, mana enwere ndekọ defragmentation wuru n'ime mmemme ị nwere ike ịnweta nke bụ ezigbo ihe mgbe niile nke mere m ji kwuo otu- Pịa dị oke, anyị nwere ike mee nke a geeky stof n'oge ọ bụla ị chọrọ nzuzo gị zaa w iping gị internet akụkọ ihe mere eme na gị niile sọọfụ metụtara, obere foto na-azọpụta ndị URL ị gara na stof dị ka, mgbe ahụ, ọ odụk Skipping Carrots na n'ezie na-aga ngwa ngwa karịa m tụrụ anya na gị usoro njikarịcha ma ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla mbipụta ị nwere ike tweak nche gị iji gbochie spyware site na ịwụnye, draịvụ draịva nke dị ukwuu, yana n'ikpeazụ onye nyocha nyocha iji hụ ma enwere ịtọrọ mmadụ ma ọ bụ nsogbu na nchekwa nke kọmputa gị, ọ na-enye gị nkọwa niile na ọbụlagodi ị na-enyocha gị nwere ike pịa ma lee anya wee nweta nkọwa ma ọ dị, ị nwere ike ime nke ahụ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ naanị usoro iji nweta igwe nhicha gị, ịmechara. Can nwere ike ịga mmemme ị chọrọ imechi. Rịba ama na enwere mgbake nke emere n'ime ihe ahụ ka ị na-agba ya, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịbanye na mgbake ahụ, lee anya ụfọdụ nyocha ị mere n'oge na-adịbeghị anya ma ị nwere ike ịlaghachi ma mezie mgbanwe ndị ahụ.
You nwere ike ihichapụ nkwado ndabere na mpaghara nke dị mma n'ihi na mgbe ị nwere nsogbu kọmputa gị nwere ike bụrụ otu n'ime nnukwu nsogbu maka onye na-enweghị oke geeky, ọ bụrụ na ị na-agba mmemme ndị a, ọ ga-ekpu ìsì ọ ga-emere gị ihe ndị a niile dị ebube. ma mgbe ahụ ihe anaghị arụ ọrụ nke ọma, ndị mmadụ na-atụ ụjọ nke ahụ, ọ ga-enye gị ntakịrị mmesi obi ike ma ị nwere ike ịmepụta oge nkwụghachi na mmemme ahụ wee lelee usoro gị weghachite ọ bụrụ na ị jiri usoro weghachite chọrọ ịlaghachi iji weghachi tupu agbapụ ya, agbapụrụ m usoro nlekọta dị elu dịka ọ bịara site na aha dị iche enweghị m ike icheta na anyị na-ekwu okwu kemgbe ọtụtụ afọ ugbu a, ọ bụ ya mere m ji gbaa ya ọsọ n'ọtụtụ sistemụ ma enweghị nsogbu na nke ahụ, yabụ ka anyị nweta obere geeky ebe a gafee na utility, ei ụfọdụ n'ime ihe ndị m na - enweghị ike igosi gị nke a nwere ike bụrụ nke ise m na-eme n'isiokwu a n'ihi na anọgidere m na ịpị otu n'ime ihe gosipụtara mywindows key gị nwere ihe nkpuchi diski diski gi nke gị Dọkịta draịva ụzọ mkpirisi m masịrị ya n'ihi na ọ na-esiri ike mgbe ụfọdụ inyocha draịvụ ike gị maka njehie. Nke a na-wuru n'ime usoro ihe omume, ọ bụ ihe ziri ezi n'ihi na ị dị ka ị pụrụ ịhụ na m rant ndị ọzọ ụbọchị m na-ekpori ndụ gị egwuregwu a otutu Booster bụ a isiokwu nke anyị nwere gị Internet Booster na a mara mma obere omume nke nwere ike tweak zoro ezo ntọala Onwe , Abụghị m nnukwu ofufe nke ọtụtụ Windows 7 na-ọma kachasị nke brọdband, ma ọ bụrụ na ị na-egwu na Internet booster i nwere ike ime na akpaka njikarịcha na nanị site na ịpị 'Gaa' họrọ ihe gị bandwit bụ na ị nwere ike pịa ebe a nwalee bandwit gị mgbe ịmaghị nke ọma mana ọ bụrụ na ị bụ obere geeky ị bi na ọnọdụ ọkachamara yana dịka ị nwere ike ịhụ ị nwere ike ịhọrọ bandwid gị ịntanetị ebe ọ bụla ịchọrọ ma jikwaa ụdị ihe niile. Agara m ma gbaa ọsọ ntanetị a na ọnọdụ akpaaka ma enweghị nsogbu na ya.
Nkọwapụta ọgụgụ isi nke ị nwere ike ịma site na iobitregister defrag. Echere m na nke a nwere ike ịba uru na Registrydefrag ma ọ bụghị nhichapụ ndekọ ị nwere ike ịnweta obere arụmọrụ site na ụzọ mkpirisi ndị a na-adịghị mma na smart smart nke na-ejikwa RAM gị dịka ị nwere ike ịhụ ntọala gị. Can nwere ike ịlele ole ebe nchekwa ị na-eji, ego ole bụ n'efu na ị nwere ike ịgbaghara m maka ịhọrọ ịkpọghe taabụ ramp ị na-eche na ị nwere nkwado ndabere gị na ị nwere akwụkwọ mpempe akwụkwọ iji kpochapụ faịlụ ahụ kpamkpam iobitsecu rity 360 d.
H. Enyemaka nchekwa, nke nwere ike ịba uru n'ihi na ị nwere ike ịlele plugins gị, ihe nchọgharị gị na ihe inyeaka, na ihe ndị ọzọ. Ọ bụ ihe dị mma mgbe niile ile anya iji jide n'aka na ọ dịghị ihe na-apụnara ihe nchọgharị gị na usoro ihe ndabere faịlụ nyocha njikwa ngwaọrụ akpaka mmechi ọchụchọ maka mmepụta oyiri faịlụ onodu menu njikwa njikwa ihe nyocha weghachite etiti anyị gosipụtara na ị ga-ewepụ ngwa achọghị ugbu a bụ nke bụ IObit uninstaller dị elu ma nwee olile anya na-ewepu ihe niile maka njikwa mmalite ị ga - abụ obere geeky Nwoke a kpachara anya, enwere m antivirus na - agba RSS m na ịchọghị 'gbanyụọ ihe nchekwa gị niile ma ọ bụrụ na ị naghị enwekarị obi iru ala, ị nwere ike google ihe ndị a kwa ịhụ ihe n'ụzọ ụfọdụ ị nweghị ike tufuo.
Enweghi ike iwepu ozi sistemụ Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ kọmputa na kọmputa gị, ị ga-agwa ha ihe dị na kọmputa gị. Enweghị m ike ịmalite ma mesịa cheta oge ahụ n'ihi na enwewo m igodo Windows m ihe karịrị afọ isii Inye nkeji oge na oge ntoju na njikwa windo gị, enwere m ike igbu ebe a n'ihi na anyị na-aga ogologo oge karịa Achọrọ m, mana echere m na isi ihe m chọrọ ịgafe bụ na ị nwere ike ibudata mmemme a, pịa igwe ọrụ nlekọta na ịpị dị mfe ma ọ bụ ị nwere ike nweta dị ka geeky dị ka ịchọrọ ma ebe m kpọrọ asị na-agba ọsọ ntakịrị nhọrọ bụ ezigbo ihe atụ, enweghi ọtụtụ ihe ịchọrọ ebe a ka igwu egwu m na-ewepụ mgbe ọ bụla na windo na-amalite na windo anaghị m akwado ya mwekota na bọtịnụ aka nri ziri ezi na-egosi atụmatụ ntụpọ gị na ebe a otutu oge a ug ị ga-achọ ịma ihe ị na-eme ebe a ma ọ bụrụ na ị bụ geek na-agụ ihe ị maara ihe ị nwere ike na enweghị ike ịme mana ị nwere ike ịmegharị ihe na-ebuli mgbe ọ bụla ịchọrọ ịhọrọ ọkwa njikarịcha ịchọrọ maka ndị ọrụ ụlọ. chọrọ inwe wdg nnukwu faịlụ na defragmentation m mentio ned na ndị ọzọ Nkuzi anyị mere na ọgụgụ isi defragmentation nke dị n'okpuru pro na amamihe optimizes gị ihicha usoro nke na-adịghị gụnyere, elu usoro mmezi, gị update nhọrọ, gị ndabere -Option na 9 na 9 a-9 Wego ọ nwere ike ka na-a mgbe na-agbalị ihe omume, e nwere a njikọ na nkọwa dị n'okpuru. Enwere m olileanya na nke a nyeere gị aka ịhụ gị oge ọzọ ekele
Kedu nke kacha ọhụrụ nke asctray.exe?
Asctray.exe bụ ụdị EXE faịlụ jikọtara na Advanced SystemCare 6 mepụtara site na IObit maka Windows Operating System. Asctray.exe a kacha mara amara bụ 6.0.2.36, nke emepụtara maka Windows 7.
Gini mere asctray m anaghị aru oru na komputa m?
Imirikiti ozi njehie ASCTray.exe a pụtara na Advanced SystemCare Pro enweghị ike ịchọta faịlụ a na mbido, ma ọ bụ faịlụ ahụ rụrụ arụ, na-ebute usoro mmalite mmalite. Ohaneze, Advanced SystemCare Pro agaghị enwe ike ibido n’emeghị njehie ndị a. ASCTray.exe - Ihe oyiyi jọgburu onwe ya. ASCTray.exe Njehie Ngwa.
Enwere ozi asctray.exe maka Netflix?
Akwụpụrụ m FF6, tinyeghachi FF5, ewepụtakwa Silverlight4, weghachite mbipute 3, ma ka nwee windo popup na-ekwupụta ozi ASCTray.exe, rtl120.bpl na-efu. Ihe niile m nwere ike ịhụ, ruo ugbu a, ọ dị ka ọ na-arụ ọrụ, belụsọ NetFlix m, nke kachasị m mkpa. Onye ọ bụla nọ n'ebe ahụ na-abanye na nke a?
Ebee ka m ga-ahụ asctray na Windows 10?
Ọ na-amalite 'ASC.exe' nke na-agba n'azụ mana enwere ike ịkwụsị iji akara ngosi akara ngosi 'Exzọ ọpụpụ', ma ọ bụ site na Task Manager. ASC nwere nsụgharị atọ, n'efu, Pro (akwụ ụgwọ), yana Ultimate, yana ASCTray ga-anọ ebe arụnyere.